Didim-pitsarana na ny famindram-po Want? | Apg29
Ny fahasoavana izay mamonjy tsy rariny.
Ary izay ireo izay tena te hitory momba ny mitsaratsara an'Andriamanitra? Eny, fa raha ny tenany izay indray mandeha, ary nanana fahasoavana be dia namonjena azy ny Jesosy. Grace izao Toa tsy mihatra amin'ny olon-kafa, afa-tsy ny tenany.
Misy ny Kristianina te azy. Inona ny famakiana Baiboly dia tsy sarotra ny mahita. Manana mamaky ny lalàna tsy fahasoavana. Dia tsy ny fitsarana fa mitady mafy, dia be toy ny Jona ka nipetraka teo ambanin'ny anjavidy anankiray sy manjoretra. Tsy mahagaga, fa maro ireo Kristianina ankehitriny Jona. Indrindra izao fa na iza na iza afaka manao ny fomba fijeriny fantatra ao amin'ny Internet.
Noho izany, Jesosy dia tonga
Jesosy tsy tonga hitondra azy ny olona. Tonga Izy mba hamonjy sy hamonjy. Inona no mahatonga izany ka saro-takarina? Ary izay ireo izay tena te hitory momba ny mitsaratsara an'Andriamanitra? Eny, fa raha ny tenany izay indray mandeha, ary nanana fahasoavana be dia namonjena azy ny Jesosy. Grace izao Toa tsy mihatra amin'ny olon-kafa, afa-tsy ny tenany. Dia nizotra izy ka eo ny lalàna izy ireo rehefa nahazo famindram-po. Ny tenany, ka tsy nahazo nitandrina ny lalàna, fa ankehitriny mangataka ny hafa mba hitandrina izany. Ahoana no mety zavatra mandeha toy izany ratsy?
Jesosy tsy tonga hitsara izao tontolo izao, dia tonga mba hamonjy, ka hamonjy azy. Izany dia tsy niova tamin'ny taona 2000. I Jesosy dia tsy miova anio. Noho avy ny fahasoavan'i Jesosy. Tsy mbola fotoana sisa mba hanaiky an'i Jesosy ary ho voavonjy. Taona ny fahasoavana izay nanomboka nitory tamin'i Jesosy mbola manan-kery. Fahasoavana no zavatra azonao maimaim-poana tsy mbola mendrika izany. Ny fe-potoana fahasoavana mihatra amin'izao fotoana izao. Tsy niova izy.
Dom over Soeda
Misy boky mahazatra antsoina hoe "Fitsarana an'i Soeda". Ny boky voasoratra amin'ny Birger Claesson izay nahazo fahitana tany am-piandohan'ireo taona 1950 izay momba ny Soeda dia manafika azy ny fanjakana tsy fantatra. Zavatra maro tanàna noravana tamin'ny tany. Noho ny Birger Claeson hafatra faminaniana no iray ao am-piangonana fifohazana ao amin'ny fiangonana maimaim-poana sy maro no nivavaka tamin'Andriamanitra.
Hoy ny boky Ny votoaty, avelako voafehy, fa eo amin'ny lafiny amin'ny anaram-boninahitra, Te fohy fanehoan-kevitra. "Fitsarana an'i Soeda", dia tena ara-baiboly? Mba hamaliana io fanontaniana io ihany no ilaintsika vakio ny Jaona 3:17. Izao no voalaza mazava tsara fa Andriamanitra tsy naniraka an'i Jesosy mba hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjy azy. Mba ataovy mazava kokoa: Andriamanitra tsy naniraka an'i Jesosy mba hanameloka Soeda fa hamonjy azy.
Ary mba hanaovana azy manokana kokoa: Andriamanitra tsy naniraka an'i Jesosy ho fanamelohana, fa hamonjy anao! Ny olona sasany manoratra momba ny olona amin'izao fotoana izao ny fahotana dia milaza fa Andriamanitra no hitsara azy teto amin'ity fiainana ity, fa i Jesoa dia tsy tonga hanameloka ny mpanota, fa hamonjy azy ireo.
hazo fijaliana mailaka
Efa nanana ny faminaniana "fitsarana an'i Soeda" nivoaka tao amin'ny bilaogiko toerana. Fa rehefa nanao an-toerana nandritra ny fotoana kelikely bilaogy dia nofoanany teo amin'ny an'arivony fahiny lahatsoratra hanomboka amin'ny aotra. Anisan'izany ny "fitsarana an'i Soeda" miaraka.
Fotsiny ny andro hafa nahazo tezitra aho e-mail azo avy olona iray. Full e-mail dia nosoratana tamin'ny sora-baventy, izay mahatonga azy sarotra ny mamaky. Mail mpanonta nanontany ny antony efa nanaisotra ny faminaniana ka nanao hoe: raha tsy nataony indray, aho tsy "tena Kristianina".
Nihevitra avy hatrany aho fa tsy Mpamonjy lahatsoratra tsy misy an'i Jesosy! Ny zavatra izay mahatonga ahy ho "tena Kristianina" dia raha manana an'i Jesosy aho fa tsy raha manana amin'ny lahatsoratra sasany.
Avy eo dia tokony handefa mailaka ny mpanonta nalaina mahita tsara kokoa ny antony ny zavatra lasa. Koa dia tsy ao amin'ny lahatsoratra ihany, fa ao amin'ny bilaogy manomboka. Talohan'ny namany Sary mbola nandinika aho dia tonga indray hamoahana ity lahatsoratra ity, fa ankehitriny aho mieritreritra ny famelana izany.
Indraindray mangovitra ny izao tontolo izao amin'izao fotoana izao ny ady sy ny loza. Fa izao no mandefa na inona na inona fa Andriamanitra. Ady sy ny loza nitranga saingy tsy misy fitsarana avy amin'Andriamanitra. Fa ny anankiray tokoa fa Andriamanitra dia nirahiny ho amin'izao tontolo izao, i Jesosy dia ny hamonjy izay rehetra mino Azy. Misy fahasamihafana lehibe an 'i Jesoa na ny didim-pitsarana.
Ady sy ny loza
Izaho indray mandeha nahita ny vaovao tamin'ny fahitalavitra mikasika ny lehilahy iray izay niantso tamin'ny famoizam-po sy nanome tsiny an'Andriamanitra rehefa natao ny maty zanaka ny fitaovam-piadiana izay efa maty tamin'ny loza:
"Andriamanitra, nahoana no naka ny zanako amiko?!"
Nihevitra avy hatrany anefa aho fa Andriamanitra no efa namono ny zanany.
Roa andro talohan'ny Noely 2008 i Eva no maty ny vadiko Marie sy ny zanany kely Joel teo an-tsandriko. Taty aoriana dia tonga ny e-mail ho ahy izay nanontany tena hoe nahoana i Jesosy namono Marie sy Joel. Mazava ho azy, dia tsy namaly ny namany Sary. Fa raha tsy nanana an'i Jesosy, izay avy eo lasa ny fanampiana sy ny fanohanana? Jesosy namonjy Marie ary izy soa aman-tsara teny an-tànany, na inona na inona nitranga. Vonona izy na oviana na oviana mba handrava, satria efa vonona ny zavatra rehetra amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Noho izany dia zava-dehibe ny manana an'i Jesosy sy hovonjena. Tsy manana antoka ho an'ny ampitso.
Jesosy dia tonga mba hamonjy antsika, fa tsy ny mpitsara.
Ity no lahatsoratra fahatelo soratako izany foto-kevitra. Ny roa farany, antsoina hoe " Andriamanitra tsy te fanenjehana " sy " Inona no hoavy no omena ny zanakao? " Misy fahatsapana fahavoazana sy ny fikorontanana ho an'ny sasany raha ny amin'ny fahasoavana sy ny lalàna. Tokony ho vao mainka mazava fa hitory ny filazantsara ny fahasoavana ao amin'i Jesosy Kristy. Ny fahasoavana izay mamonjy tsy rariny.